Hababka ka hortagga uurku waxaa jira habab kala duwan oo lagaga hortago si aan la uureysan | Blog
Hlth Health News You & Your Family Hababka ka hortagga uurku waxaa jira habab kala duwan oo lagaga hortago si aan la uureysan
Hababka ka hortagga uurku waxaa jira habab kala duwan oo lagaga hortago si aan la uureysan	Thursday, 06 December 2012 11:18	Axadle	Hits: 3625	pregnancy
Cafimaadka \_ You and Your Family Waa muhiim in la helo habka qofka laftiisa ku haboon. Waxaa talo ku saabsan ka hortagga uurka bixin kara dhakhtar, kalkaalisada caafimaadka guud, umulisada iyo kalkaalisooyinka. Dhammaan dadka ka shaqeeya xarumaha dhakhaatiirta, rugaha caafimaadka iyo isbitaallada waxey leeyihiin waajib sir qarin ah oo saraan.
•Dabool •Maadadaha xawada dila
•Kiniinka-P oo aan laheyn hormoon
•Kiniin mareeg- P
•Ka hortag degdeg ah (nödprevention)
•Ka hortag aan ammaan aheyn
Kondom waa cinjir yar oo khafiif ah kaas oo la geliyo guska oo kacsanaya. Waa in cinjirka la gashanaado ilaa inta galmadu socoto. Ammaanka cinjirju wuxuu sii kordhaa haddii lala isticmaalo kiriimyada ama xunbooyinka dila xawada. Waxa kale oo uu cinjirku difaacaa cuddurada galmada lagu kala qaado iyo HIV-ga. Cinjirka meel kasta waa lagu iibiyaa: dukaamada cuntada, farmasiiga, kaalmaha shidaalka, iwm. Cinjirku waa hab aad u ammaan ah haddii si sax ah loo isticmaalo.
Pessar-ku waxa weeye dabool cinjir ah oo ey gabadhu gelineyso siilka dhexdiisa si uu u daboolo ilmagaleenka. Daboolku wuxuu leeyahey xajmiyo kala duwan waxaana ku habeeya dhakhtarka. Daboolka waxa lala isticmaalayaa kiriimyada xawada dila. Waxa daboolka la isgelin karaa waqti kasta galmada kahor, waana inuu meesha ku sii jiro ugu yaraan lix saacadood galmada kadib. Dumarka badankoodu wey isticmaali karaan daboolka. Daboolku waa maada ka hortag oo ammaan ah marka lala isticmaalo kiriimyada xawada dila haddii si fiican loo geliyo siilka.
Maadooyinka xawada dila
Maadadaha xawada dila waxa lala isticmaali karaa cinjirka iyo daboolka, keli ahaana kuma habboona hab ka hortag. Waxa la helaa isaga oo samballo badan ah sida kiriim, xunbo, jel ama isaga oo ah kinniinada dabada la iska geliyo. Maadadahaas waxa laga iibadaa farmasiga warqad dhakhtar la’aan ah, waxaaney keeni karaan cillado dambe oo aad u yar.
Kinniinada-p ee aan laheyn hoormoonka
Waxa suuqa norwey laga helaa nooc keliya oo ah kinniinada-p oo aan laheyn hoormoonka ostrogenka. Kinniinku wuxuu joojiyaa in ugxantu soo go’do. Si uu kinniinku si fiican ugu shaqeeyo waa muhiim in kinniinka la qaato waqti isku mid ah maalin kasta. Dumarka ilmaha nuujiyaa waxey sidoo kale isticmaali karaan kinniinka. Haddii kinniinka si sax ah loo isticmaali karo, ku dhawaad 100 % waa ammaan. Waa in dhakhtarku qoro warqadda lagu iibsanayo kinniinada-p ee aan laheyn hoormoonka ostrogenka.
Kinniinada-p ee caadiga ah waxa la soo iibsanayey in kabadan 30 sanno. Waxa ku jira laba hoormoon oo kala duwan: östrogen iyo gestagen. Hoormoonadani waxey u egyihiin hoomoonnada ey sameeyaan ugxan galeenku. Kinniinada-p ee kala duwan waxa la isugu darey siyaabo kala duwan. Dhakhtarkaaga ayaa kaa caawinaya si uu kuugu helo nooca adiga kugu haboon dabadeedna warqad kuugu qoraya. Kinniinadu waxey joojinayaan in ugaxantu soo go’do waxaaney ku adkeeyaan ugxantu iney ku dhegto xuubka ilmagaleenka. Kinniinada-p waa hab ka hortag oo ammaan ah haddii si sax ah loo qaato. Waa in dhakhtarku qoro warqad lagu iibsado kinniinada.
Dumarka da’doodu ka weyn tahey 35 sanno ee sigaarka caba, waa inaaney qaadan kinniinada-p. Waxey tani khuseysaa oo kale dumarka ey ku dhaceen xinjir dhiig, kansarka naasaha, wadno istaag, wadno xanuun kale ama cudduro halis ah oo ku dhacey beerka.
P-ringen-ku waa mareeg jilicsan oo bedbedelmi karta oo qofka dumar ah lafteedu siilka iska geliso. Mareegta waxa ku jira hoormoonada ostrogen iyo gestagen, oo laakiin ka yar inta ku jirta kinniinada-p. Mareegtu waxey si tartiib ah u sii deysaa hoormoonadaas. Mareegtu waa iney ku jirto siilka ilaa saddex todobaad. Markaas waa in mareegta la iska soo saaro, oo mid cusub la isgeliyo todobaad kadib. Mareegtu waxey joojisaa in ugxantu soo go’do. Waa wax fudud in mareegta la isticmaalo. Mareegta waxa laga heli karaa farmasiiga marka la tuso warqad dhakhtar. Ammaankeedu aad ayuu u fiican yahey. Dumarka aan isticmaali karin kinniinada-p, sidoo kale ma isticmaali karaan mareegta-p.
Balastarka-P waxa ku jira cadad ostrogen iyo gestagen oo la mid ah waxa ku jira cadadka ugu hooseeya ee kinniinada-p. Hoormoonada waxa lagu sii dhex dayaa maqaarka. Balastarka waa in la bedelo maalin isku mid ah saddex todobaad. Marka la isticmaaley saddex balastar saddex todobaad waa in laga qaato todobaad nasasho ah inta aan la isku dhejin balastar cucub, maalmo isku mid ah. Balastarku wuxuu joojiyaa in ugxantu soo go’do. Balastarka waxa laga heli karaa farmasiiga marka la tuso warqad dhakhtar. Wuxuu leeyahey ammaan la mid ah ka kinniinada-p.
Minipillen waxa ku jira hormoon keliya: gestagen. Minipillen waa in la qaato waqti isku mid ah maalin kasta. Haddii aad ilawdo inaad qaadato kiniinka oo ey ka soo wareegto 27 saacadood inta u dhaxeysa qaadashada laba kinniin, waa inaad si dheeraad ah isaga ilaaliso uureysi 14 cisho ee soo socda. Kinniinka waa in markaa si caadi ah loo qaato. Minipillen waxa loogu baahan yahey warqad dhakhtar.
Hormonspiralen waa shey yar oo dhakhtarku geliyo ilmagaleenka. Waxey noqon kartaa yara dhibaato marka xuubka la gelinayo, laakiin si dhakhso ah ayuu xanuunku u dhamaadaa. Haddii xanuunku sii socdo waa in la xidhiidho dhakhtar. Xuubka hormuunku wuxuu joojiyaa korida xuubka ilmagaleenka wuxuuna saameeyaa in xawadu geli kari weydo xabka ku jira ilmagaleenka. Waxa kale uu joojiyaa in xawadu dhex dabbaalato ilmagaleenka dhexdiisa. Xuubka hormuunku wuxuu shaqeeyaa muddo dheer. Waa hab kahortag oo ammaan weyn leh.
Waxa suuqa dalalka iskandaneviyaanka yaalla laba nooc oo implantat ah. Waxey qiyaastii leeyihiin xajmiga kabriidka (taraqa) waxaana ku jira hoormoonka gestagen. Waxa la dhex geliyaa haraga ka hooseeya gacanta muddo ah saddex ilaa shan sanno, waxey ku xidhan tahey nooca. Waxa sameeya dhakhtar. Waxa implatanku u shaqeysaa iyada oo joojisa in ugxantu soo baxdo iyo iyada oo saameyn ku yeelata xabka ku jira ilmagaleenka si ey ugu adkaato in xawadu gaadho ilmagaleenka iyo dhuunta ey soo raacdo ugxantu. Implantat-ku waa ka hortag ammaan ah.
waxa la dhexgeliyaa ilmagaleenka. Si la mid ah sida xuubka hoormoonka. Xuubku wuxuu joojiyaa in ugxantu ey ku dhegto ilmagaleenka. Sidoo kale waxey maartu joojisaa in xawadu dhex dabaalato ilmagaleenka dhexdiisa. Xuubku wuxuu si fiican u shaqeeyaa inta u dhaxeysa shan ilaa toban sanno, wuxuuna bixiyaa ka hortag uur oo aad u fiican. Xuubka maartu wuxuu keeni karaa caado xoog ah, mararka qaarkoodna xanuun caado.
Dhufaanidu waa hab kama dambeys oo ka hortag. Nin ama gabadh la dhufaaney, carruur ma dhali karaan. Qalliinkana marar aad u dhif ah ayaa dib loo bedeli karaa. Waxa markaa muhiim ah in aad looga fekero inta aan tallaabadaas la qaadin.
Ka hotag degdeg ah (nödprevention)
Haddii galmo la sameeye qiyaastii mudada ugxantu soo go’ayso, furasada in la uureysaa waa 20 %. Haddii la sameeyo galmo waqtigaas iyada ah oo aan la isticmaalin ka hortag, waxa farmasiga laga iibsan karaa maadadaha ka hortagga degdegga oo aan loogu baahneyn warqad dhakhtar. Kuwani waxa weeye kinniino hoormoono oo gaar ah oo laga qaato in weyn 72 saacadood gudahood galmada kadib. Waa muhiim in saddex ilaa afar todobaad kadib dhakhtar loo tago si loo eego in la uureystey. Kinniinku wuxuu dhaawici karaa ilmaha haddii la sii lahaado uur. Waxa kale oo uurka lagu joojin karaa iyada oo shan cisho markii galmada aan isilaalinta laheyn la sameeyey kadib xuub la isgeliyo.
Ka hortag aan la hubin
Waqtiyada la hubo
Tixraac qoraledka ahaan waxa laga hortegi karaa inaan uur la yeelan haddii aan la sameyn galmo waqtiga ugxantu soo go’eyso. Tani waa hab aan aad loo hubin, waayo dhererka waqtiga labo caado u dhexeeya iyo waqtiga soo gu’idda ugaxantu waxey aad ugu kala duwan tahey dumarka kala duwan.
Haddii galmada la joojiyo intaan la biyobixin kahor, waxey tani joojin kartaa in la uureysto. Habkani haddana ma aha ammaan. Waxa siilka geli kara unugyo xawo inta aan la biyobixin kahor, unagyada xawada ee haraga dhuunta waxey sii geli karaan siilka.
Axadle International Monitoring-Sweden
Sheegista maalinta iyo waqtiga ay haweeneyda uurka lihi ummuli DoontoDhakhaatiirta kuwa ugu aqoonta badani ma awoodi karayaan inay sii sheegaan maalinta iyo waqtiga ay h
Khalid oo ah wiil yar oo shan jir ah oo raboo in loo dhiso gabadhKhalid oo ah wiil yar oo kunol magaaladda Tacis ee Dalka Yamen oo Ay da'diisu tahay 5 jir ayaa
CALAAMADAHA UURKA BILAWGA AHWaxaa jira dhowr calaamadood oo lagu garto inay haweeneydu uur qaadday, ha yeeshee calaamadahaasi mi
Ilmahaaga cusub iyo adiga!!Marka aad tahay waalid cusub, waxa laga yaabaa inaad qabtid su’aalo ku saabsan ilmahaaga. Halkan h
Metus massa semper accumsan Cras egestas risus enim pretium pretium risus. Et libero elit ornare